Thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအားသဘာဝဆုများနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်စုဆောင်းသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုအပြုအမူ၌ဤ thalamic နျူကလိယတွင် orexin / hypocretin အချက်ပြမှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ of ၏လတ်တလောသက်သေသာဓက (2014) - Your Brain On Porn
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2014; 8: 117 ။
2014 ဧပြီ3အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2014.00117
Alessandra Matzeu,* အီဗာ R. Zamora-Martinezနှင့် Rémiမာတင်-Fardon
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အောင်မြင်သောကုသမှုများအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ပြန်သွားကြသည်မှကြာရှည်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့် abstinence ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပြန်လည်စတင်ဖို့မလှူ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြကြောင်းမျိုးစုံဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီကအဆိုပါ orexin / hypocretin (Orx / Hcrt) စနစ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Orx / Hcrt စနစ်ကနို့တိုက်ကျွေးရေး, စွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်ခြင်း, arousal အပါအဝင်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ထိန်းညှိ။ ဒါဟာအစအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စုဆောင်းခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ Orx / Hcrt အာရုံခံအများစုအတွက် thalamus (PVT) ၏ paraventricular နျူကလိယမှမှန်းချက်ရဲ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, သတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်ထို့နောက် mesolimbic ဆုလာဘ်များနှင့် extrahypothalamic စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ modulates တဲ့ "လမ်း-ဘူတာရုံ" အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးဒေသတွင်တည်ရှိသည် ။ က "မူးယစ်ဆေးစွဲ circuitry" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မထင်သော်လည်း, မကြာသေးမီအထောက်အထား PVT ဆုလာဘ်ယေဘုယျအားဖြင့် function ကိုများနှင့်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုယေဘုယျအားဖြင့်ဆုလာဘ် function ကို၏မော်ဂျူအတွက် PVT အတွက် Orx / Hcrt transmission အတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူဖော်ပြသည်။ တဦးတည်းအယူအဆအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါတို့သည် Orx / Hcrt စနစ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်ဦးစားပေးအခန်းကဏ္ဍရရှိသည်ကြောင်း vs။ သဘာဝကဆုလာဘ်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, အထူးသ Orx / Hcrt-PVT neurotransmission အားဖြင့် PVT ၏ maladaptive စုဆောင်းမှုအကြံပြုကြောင်းမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
keywords: paraventricular အဆိုပါ thalamus ၏နျူကလိယ, orexin / hypocretin, မူးယစ်ဆေးစွဲ, မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ, သဘာဝဆုလာဘ်
မူးယစ်ဆေးစွဲမြဲမူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေ (O 'Brien နှင့် McLellan ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါ 1996; Leshner, 1997; O 'Brien et al ။ , 1998; McLellan et al ။ , 2000) ။ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ pharmacological ကုသမှုပစ်မှတ်၏စွဲလမ်းနှင့်မှတ်ပုံတင်များ၏နာတာရှည် relapsing သဘာဝအခြေခံသော neurobiological ယန္တရားများ၏ Elucidation စွဲသုတေသနအတွက်ဗဟိုပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများစွဲ၏ compulsive အမူအကျင့်လက္ခဏာများကိုထိန်းညှိသောအာရုံခံအလွှာရှင်းလင်းပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများ (မူးယစ်ဆေးရှာကြံ) -like အပြုအမူဟာ medial prefrontal cortex, basolateral amygdala, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယက, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, hippocampus, နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum (Everitt ပါဝင်သည် et al ။ , 2001; McFarland နှင့် Kalivas, 2001; Cardinal et al ။ , 2002; စတိန်းနှင့် Volkow, 2002; Ito က et al ။ , 2002; ကြည့်ရှုပါ, 2002; Kalivas နှင့် Volkow, 2005; Weiss, 2005; ဘီးလင်းနှင့် Everitt, 2008; Steketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာအထောက်အထား thalamus လည်းစွဲ၏ neurocircuitry တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းအဆိုပြုထားခဲ့ပါသည်။ အမှန်မှာက ventral striatopallidum နှင့် dorsal striatum အကြားအရေးပါသောသော့ချက် relay ကိုစဉ်းစားသည်နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအပြုအမူ (ပီယပ်နှင့် Vanderschuren ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ 2010).
အဆိုပါ thalamus ၏အရေးပါအကြား, အ thalamus (PVT) ၏ paraventricular နျူကလိယတစ်ဦးအရေးပါသော neuroanatomical အနေအထားရှိပြီးထို့ကြောင့်မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူ (Moga et al ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြကြောင်းအဆောက်အဦများသြဇာလွှမ်းမိုး။ , 1995; Bubser နှင့် Deutch, 1998; ဗန် der Werf et al ။ , 2002) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက်သိသာဆက်စပ်မှု၏ PVT ၏ hypothalamic orexin / hypocretin (Orx / Hcrt) innervation ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်လေးကျိုးနွံဖိုင်ဘာသိပ်သည်းဆဟာကပ်လျက် midline နှင့် intralaminar thalamic အရေးပါ (Kirouac et al တှငျတှေ့မှုမှာ Orx / Hcrt peptides, ဒီ thalamic နျူကလိယ၏အားလုံးဒေသများတွင်တည်ရှိသောအမျှင်၌တွေ့နေကြပါတယ်။ , 2005) ။ ဆွဲဆောင်မှုအထောက်အထားနှိုးပြည်နယ်၏ arousal နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် Orx / Hcrt များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (က de Lecea, ပြသပေမယ့် 2012), နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Mahler et al တွေ့မြင်အထူးသဖြင့်ယေဘုယျဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အရေးပါသောနှင့်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ , 2012).
အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားယေဘုယျဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရည်ညွှန်းပြီး "ပုံမှန်" အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူမှဆက်စပ်ပြအာရုံကြောခွဲခြားကားအဘယ်သို့သောအခါ vs။ မူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေမူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ယူပြီးအပြုအမူတွေ၏ထိန်းချုပ်မှုဖျန်ဖြေသောအာရုံခံဆားကစ်ကိုပိုစေ့စ့စပ်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated နှင့်စွဲ-related ဖြစ်စဉ်များများအတွက်သီးခြားမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းဘုံစိတ်ခွန်အားနိုးအာရုံခံအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ "ပုံမှန်အားဖြင့်" သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်မှုအသစ်သောစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များဖန်တီးသို့မဟုတ်ပုံမှန်အားမူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူဆီသို့သဘာဝကဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအချက်ပြ redirect နိုင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အာရုံခံ activation (ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏ etiology အတွက်အသစ်တခု neurotransmission system အဖြစ်, အထူးသ Orx / Hcrt-PVT ဂီယာ, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် PVT ၏ maladaptive စုဆောင်းမှုအကြံပြုကြောင်းမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်အနှစ်ချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ PVT တတိယ ventricle ၏ dorsal ရှုထောင့်မှကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ PVT dorsal midline thalamic အရေးပါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အ arousal, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အသိအမြင် (Bentivoglio et al နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ , 1991; Groenewegen နှင့် Berendse, 1994; ဗန် der Werf et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ midline နှင့် intralaminar thalamic အရေးပါပထမဦးဆုံး Non-ခွဲခြားဆက်ဆံမှု nociceptive သွင်းအားစု (Berendse နှင့် Groenewegen ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တွေးဆခဲ့ကြပေမယ့် 1991), ဒါကြောင့်ယခုကောင်းစွာသည်ဤအရေးပါအသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာ cortex နဲ့ striatum ၏ function ကွဲပြားဒေသများ (Groenewegen နှင့် Berendse innervates ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည် 1994; ဗန် der Werf et al ။ , 2002; Smith က et al ။ , 2004).
Neuroanatomical လေ့လာမှုများ PVT arousal နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် function ကို (Cornwall နှင့် Phillipson နှင့်အတူဆက်နွယ် brainstem ဒေသများထံမှစီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းပြသကြ 1988b; ချန်နှင့် Su, 1990; Ruggiero et al ။ , 1998; Krout နှင့် Loewy, 2000; Krout et al ။ , 2002; Hsu နှင့်စျေး, 2009) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens (Berendse နှင့် Groenewegen, ရန်၎င်း၏စီမံချက်များမှတဆင့်ထို့ပြင် PVT, 1990; su နှင့် Bentivoglio, 1990; Brog et al ။ , 1993; ဖရီးမနျးနဲ့ Cassell, 1994; Moga et al ။ , 1995; Bubser နှင့် Deutch, 1998; Otake နှင့် Nakamura, 1998; Parsons et al ။ , 2007; လီများနှင့် Kirouac, 2008; Vertes နှင့်ဟူးဗား, 2008; Hsu နှင့်စျေး, 2009ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် cortico-striatal ယန္တရားများကိုထိခိုက်မယ့်ထူးခြားတဲ့အနေအထားတွင်), နေရာတွေကဒီ thalamic ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (Pennartz et al ။ , 1994; Cardinal et al ။ , 2002; Walker က et al ။ , 2003).
အဆိုပါ PVT အဆိုပါ suprachiasmatic, arcuate, dorsomedial နှင့် ventromedial အရေးပါနှင့် preoptic နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဒေသများ (Cornwall နှင့် Phillipson, အပါအဝင် hypothalamus အတော်ကြာဒေသများထံမှကြီးမားသောနှင့်ကွဲပြားသွင်းအားစု, အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 1988a; ချန်နှင့် Su, 1990; Novak et al ။ , 2000a; ဖုန်ကြားရှင်နှင့် Bentivoglio, 2004; Kirouac et al ။ , 2005, 2006; Otake, 2005; Hsu နှင့်စျေး, 2009လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့), အရေးပါသောအဆောက်အဦများ (Swanson, 2000) ။ ထူးခြားသည် PVT Orx / Hcrt hypothalamic အာရုံခံ (Kirouac et al ၏ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ , 2005) နှင့်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, arousal နှင့်အစားအစာဆုလာဘ် (ဥပမာ, ကယ်လီ et al များ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်သော hypothalamus နှင့် cortical-striatal စီမံချက်များအကြားတစ်ဦးကို interface အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2005).
အဆိုပါ PVT ၏အာရုံခံ activation စုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းစမ်းသပ်ချက်တသမတ်တည်းဒီဦးနှောက်ဒေသ arousal ၏ကာလအတွင်းမှာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု (Peng က et al နေဖြင့်စုဆောင်းကြောင်းပြသကြ။ , 1995; Bhatnagar နှင့် Dallman, 1998; Novak နှင့် Nunez, 1998; Bubser နှင့် Deutch, 1999; Novak et al ။ , 2000b; Otake et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ PVT လည်းနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စွမ်းအင်လက်ကျန်ငွေ (Bhatnagar နှင့် Dallman, တုန့်ပြန်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး 1998, 1999; Jaferi et al ။ , 2003) ။ အစပိုင်းတွင်စွဲ၏ neurocircuitry အတွက်မပါဝင်ပေမယ့်, မကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားမူးယစ်ဆေး-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏မော်ဂျူအတွက် PVT implicates ။ တကယ်တော့ထိုသို့သောနျူကလိယ accumbens, amygdala, အိပ်ရာပု stria terminalis ၏နျူကလိယနှင့် prefrontal cortex (Moga et al ကဲ့သို့သောမူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူ၏ထိန်းချုပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဟုဦးနှောက်ဒေသများဖို့ PVT စီမံကိန်းများကို။ , 1995; Bubser နှင့် Deutch, 1998; ဗန် der Werf et al ။ , 2002) ။ အရေးကြီးတာက, အစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက် (Dayas et al ရှာကြံအီသနောစဉ်အတွင်း PVT ၏ရွေးချယ် activation သရုပ်ပြခဲ့သည်။ , 2008; နေသည်နှင့်တူသည် et al ။ , 2009), နှင့်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို (မာတင်-Fardon et al ရှာကြံသဘာဝကဆုလာဘ် (ဥပမာအလွန်အရေးပါတယ်လို့သမားရိုးကျစစ်ကူ) ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်မဟုတျကွောငျးကိုကင်းရှာစဉ်အတွင်း PVT ၏အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် activation ပြသခဲ့သည်။ , 2013) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများထဲတွင်ဤသုံးသပ်ချက်ကို drug- အတွက် PVT များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆြေးြေိံး vs။ သဘာဝကဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ (က nondrug ထိန်းချုပ်မှု) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုထိထိရောက်ရောက်မမူးယစ်ဆေးတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ nondrug အခြေအနေ (များသောအားဖြင့်မွှေးအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်) သတ်မှတ်ဖို့ "သမားရိုးကျစစ်ကူ" သို့မဟုတ် "သဘာဝကဆုလာဘ်" စည်းကမ်းချက်များကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ Orx / Hcrt စနစ်က
ထို့အပြင် hypocretins (Hcrt-1 နှင့် Hcrt-2) အဖြစ်လူသိများ Orx / Hcrt peptides, orexin A နှင့် B (Orx-A နှင့် Orx-B) မှ, neuropeptides dorsal ဥ hypothalamic အရေးပါ၏အာရုံခံအတွက်သီးသန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်: နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus, perifornical နျူကလိယ နှင့် dorsomedial hypothalamus (က de Lecea et al ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998b) ။ Orx-A / Hcrt-1 နှင့် Orx-B က / Hcrt-2 ပုံမှန်အတိုင်း proteolytic အပြောင်းအလဲနဲ့ (က de Lecea et al မှတဆင့်တစ်ဘုံတစ်ခုတည်းရှေ့ပြေး polypeptide, prepro-orexin ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကား peptides sequence ကိုတူညီမျှဝေနှစ်ခု receptors များအတွက် ligands နေသောခေါင်းစဉ်: Hcrt-r1 နှင့် Hcrt-r2 ။ Sakurai; Hcrt-r1 အဆိုပါ 20 nm အကွာအဝေးအတွင်း (ဆင်တူဆှဖှေဲ့နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး peptides ချည်နှောင်သော်လည်း Hcrt-r30, 10-1000 nm ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ Orx-တစ်ဦးချည်နှောင်ပေမယ် Orx-B ကိုများအတွက်အများကြီးနိမ့်ဆှဖှေဲ့ (2-ခေါက်အောက်ပိုင်းမှ 40-) ရှိပါတယ် et al ။ , 1998a; Ammoun et al ။ , 2003; Scammell နှင့် Winrow, 2011) ။ အတော်များများကလေ့လာမှုများ Orx / Hcrt receptors, G-ပရိုတိန်းမှ coupled ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုကြသည်။ သို့သော်ဤ receptors ၏ G-နားချင်းဆက်မှီဝေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေပေမယ့် Hcrt-r1 နှင့် Hcrt-r2 နှစ်ဦးစလုံးစုံတွဲ, G ဖို့များပါတယ်အများအပြားတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးI / O,, Gs နဲ့ Gq မိသားစုမှာ G-ပရိုတိန်း (Gotter et al ။ , 2012; Kukkonen, 2013).
Orx / Hcrt အာရုံခံ Peyron et al (အရှင်မျိုးစုံတွင် neuron circuitries လွှမ်းမိုး, တစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက်မှမြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများနှင့်စီမံကိန်းကနေသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိ။ , 1998; နေ့စွဲ et al ။ , 1999; Nambu et al ။ , 1999) ။ သိပ်သည်း Orx / Hcrt ဆိပ်ကမ်း Peyron et al (ထိုနှောက် cortex, olfactory မီးသီး, hippocampus, amygdala, Basal forebrain, hypothalamus, tuberomammillary နျူကလိယ, PVT, အ hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယနှင့် brainstem တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ , 1998; နေ့စွဲ et al ။ , 1999; Nambu et al ။ , 1999) ။ Orx / Hcrt အာရုံခံနျူကလိယ shell ကို, amygdala, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယက, hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယနှင့် preoptic ဧရိယာ (Sakurai et al accumbens, အ medial prefrontal cortex ကနေစီမံချက်များလက်ခံရရှိ။ , 2005) ။ Hcrt-rs နှငျ့ ပတျသကျ. Hcrt-r1 နှင့် Hcrt-r2 mRNAs ၏ကန့်သတ်ထပ်ဖြန့်ဝေ Hcrt-r1 နှင့် Hcrt-r2 အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု (Trivedi et al အတူပြသခဲ့ကြသည်။ , 1998; lu et al ။ , 2000; Marcus et al ။ , 2001; ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Aston-ဂျုံးစ် et al ကြည့်ပါ။ , 2010), အသီးအသီးအဲဒီ receptor မျိုးကွဲများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍအဆိုပြု။
သောကြောင့်ယင်း၏ဆက်သွယ်မှု၏, ထို Orx / Hcrt စနစ်ကဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုများစွာသောလူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အဆိုပါ Orx / Hcrt system ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ကျွေး, arousal, အိပ်ပျော်ခြင်း / နိုးထပြည်နယ်များ, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, စွမ်းအင် homeostasis နှင့်ဆုလာဘ် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Tsujino နှင့် Sakurai တွေ့မြင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် 2013) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်မှာသက်သေအထောက်အထား (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Mahler et al တွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် Orx / Hcrt system အတွက်အရေးပါသောနှင့်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ , 2012အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (Harris က et al မှာတည်ရှိပါတယ်), အထူးသ Orx / Hcrt အာရုံခံ။ , 2005) ။ အထူးသ, အ PVT ဤအာရုံခံစီမံကိန်းနျူကလိယ shell ကို, ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာသည် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယကို၎င်း, stria terminalis (Peyron et al ၏အိပ်ရာနျူကလိယ accumbens ။ , 1998; Baldo et al ။ , 2003; Winsky-Sommerer et al ။ , 2004) ။ မူလက Sakurai et နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း (အယ်လ််ပတ်သက်နေ။ , 1998a; Edwards က et al ။ , 1999; ဟေး et al ။ , 2000, 2002), ဤအအာရုံခံမူးယစ်ဆက်စပ်အပြုအမူတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလှူငွေ (Harris က et al အတူဆုလာဘ် function ကိုတစ်ဦး modulatory အခန်းကဏ္ဍ။ , 2005).
အဆိုပါ Orx / Hcrt system ကို contibutes အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှ
Orx / Hcrt မူးယစ်ဆေးကိုရှာခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်လုပ်ရပ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်, မူးယစျဆေးရရှိနိုင်မှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့, Orx-တစ်ဦး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ventral tegmental ဧရိယာ microinjection အဆိုပါ Hcrt-r1 ရန်၏အုပ်ချုပ်မှုသော်လည်း, မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ၏သက်တမ်းတိုးထုတ်လုပ် N- (2-methyl-6-benzoxazolyl) -N'' -1,5-n-aphthyridin-4-yl ယူရီးယား (SB334867) မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (Harris က et al ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး attenuates ။ , 2005) ။ အဆိုပါ Hcrt-r1 ရန် SB334867 နှင့် 5-bromo-, စနစ်တကျထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ CPP က၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် Orx / Hcrt ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတူတသမတ်တည်းN- [(2S,5S) -1- (3-fluoro-2-methoxybenzoyl) -5-methylpiperidin-2-yl] methyl-pyridin-2-Amin (GSK1059865) cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (Gozzi et al ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလျှော့ချပေးပါတယ်။ , 2011; Hutcheson et al ။ , 2011; Sartor နှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2012), ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Hcrt-r1 များအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ စိတ်ဝင်စားစရာ Hcrt-r2 ၏ပါဝင်မှုကိုမကြာသေးမီကအီသနောရဲ့အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုအချို့တွင်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။ (2-dibromo-phenyl) ကို အသုံးပြု. Hcrt-r2,4 ၏ပိတ်ဆို့ -3 - ([4S,5S] -2,2-dimethyl-4-phenyl- [1,3] dioxan-5-yl) -urea (JNJ-10397049) ကိုဝယ်ယူ, စကားရပ်များနှင့်အီသနော-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (Shoblock et al ၏ reinstatement လျော့ချဖို့အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ , 2011), Hcrt-r2 အီသနော၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း။
Orx / Hcrt လည်း psychostimulant-သွေးဆောင် locomotor ာင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှဖော်ပြထားခဲ့သည်။ SB334867, ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းဝယ်ယူပိတ်ဆို့သည့် ventral tegmental ဧရိယာ (Borgland et al ၏ dopaminergic အာရုံခံအတွက်ကိုကင်းများကသွေးဆောင် excitatory ရေစီးကြောင်း၏အလားအလာ antagonized Peripheral ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် ventral tegmental ဧရိယာသို့။ , 2006), နှင့် Quarta et al (စိတ်ကြွဆေးအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပိတ်ဆို့ထား။ , 2010) ။ ထိုမှတပါး dual-Hcrt-r1 / Hcrt-r2 ရန် N-biphenyl-2-yl-1 - [[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl) sulfanyl] acetyl] -l-prolinamide အလားတူဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပိတ်ဆို့ထား နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေး (Winrow et al ပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၌စိတ်ကြွဆေးထိခိုက်စေ plasticity-related ဗီဇစကားရပ်၏။ , 2010).
Orx / Hcrt လည်းမူးယစ်ဆေးယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ထိုးသွင်းတဲ့အခါ, Orx-A / Hcrt-1 Espana et al (အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် breakpoints အားတိုးပွါး။ , 2011) ။ SB1 နှင့်အတူ Hcrt-r334867 Antagonizing Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (Espana et al သို့ထိုးသွင်းအခါနျူကလိယအတွက် dopaminergic အချက်ပြ၏ကင်း-သွေးဆောင်တိုးမြှင့် accumbens attenuates ။ , 2010) ။ ထို့အပြင် Hcrt-r1 များ၏ပိတ်ဆို့ Holland et al (နီကိုတင်းလျော့နည်းစေပါသည်။ , 2008) နှင့်ဘိန်းဖြူ (စမစ်နှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2012) Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့် Hcrt-r1 သို့မဟုတ် Hcrt-r2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံး sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Lawrence et al နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ, အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေ။ , 2006; Shoblock et al ။ , 2011; ဘရောင်း et al ။ , 2013) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် Hcrt-r2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း Schmeichel ကကာကွယ်နိုင် et al (compulsive ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေကြောင်း။ , ပြသကြ 2013).
Orx / Hcrt စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အစပျိုးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ Orx-A / Hcrt-1 intracranial Self-stimulation (ICSS) တံခါးခုံတိုးပွါးနှင့် (Boutrel et al ရှာကြံကိုကင်းနှင့်အနီကိုတင်း reinstates ။ , ၏ Intracerebroventricular (ICV) ဆေးထိုး 2005; ပလာဇာ-Zabala et al ။ , 2010) ။ ထို့အပွငျ Hcrt-r1 များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Boutrel et al ရှာကြံကိုကင်း, အီသနောနှင့်ဘိန်းဖြူ cue- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ကာကွယ်ပေးသည်။ , 2005; လောရင့် et al ။ , 2006; Richards et al ။ , 2008; Smith က et al ။ , 2010; Jupp et al ။ , 2011b; Smith ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2012; မာတင်-Fardon နှင့် Weiss, 2014a,b).
အဆိုပါ Orx / Hcrt စနစ်ကအစမူးယစ်ဆေးဝါးရုပ်သိမ်းရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပြသလျက်ရှိသည်။ SB334867 Sharf et al (နီကိုတင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များ attenuates ။ , 2008; ပလာဇာ-Zabala et al ။ , 2012), နှင့် Orx / Hcrt အာရုံခံစူးရှသောနီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ activated နှင့်နီကိုတင်းနေစဉ်အတွင်းနေကြသည် (Pasumarthi et al ။ , 2006; ပလာဇာ-Zabala et al ။ , 2012) နှင့်မော်ဖင်းအကိုက် (Georgescu et al ။ , 2003) ရုပ်သိမ်းရေး။ အချို့လေ့လာမှုများ Bayerlein et al (ညျလူသားတို့သွေး Orx / Hcrt အဆင့်ဆင့်နှင့်အရက်ကနေဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှု၏တည်ရှိမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2011; ဗွန် der Goltz et al ။ , 2011), အ Orx / Hcrt စနစ်ကတိရစ္ဆာန်နဲ့လူသားတို့မူးယစ်ဆေးမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများများအတွက်အရေးကြီးသောသောအယူအဆ supporting ။
မူးယစ်ဆေးစွဲထဲတွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orx / Hcrt အာရုံခံများအတွက်တစ်ဦးကဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ (Harris က et al တည်ရှိ။ , 2005) ။ ကိုကင်း, အီသနော, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အစားအစာ (Harris က et al နှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ဖြစ်လာသည့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orx / Hcrt အာရုံခံ။ , 2005; Dayas et al ။ , 2008; မာတင်-Fardon et al ။ , 2010; Jupp et al ။ , 2011b), အနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် Orx / Hcrt microinjection မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု (Schneider et al တိုးပွားစေပါသည်။ , 2007) ။ အစားအစာ, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများကသွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus Orx / Hcrt အာရုံခံ (Harris က et al ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ , 2005) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကင်း-သွေးဆောင် CPP ကကိုကင်း (Zhou et al အားဖြင့်သွေးဆောင်ခိုင်မာတဲ့အာရုံခံ activation အောက်ပါအတိုင်းကြောင့်အစားထိုးတုံ့ပြန်ချက်အချို့ကိုပုံစံအကြံပြုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orx / Hcrt mRNA စကားရပ်ထဲမှာကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ , 2008).
အမူအကျင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထား Borgland et al (Orx / Hcrt အဆိုပါ neurobehavioral အတွက်အချက်ပြခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအီသနောနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ , 2006; Bonci နှင့် Borgland, 2009; Thompson နှင့် Borgland, 2011) ။ အရေးကြီးတာက, Orx / Hcrt မူလက Sakurai et al (နို့တိုက်ကျွေးမှုထိန်းညှိရန်အစီရင်ခံခဲ့ hypothalamic neuropeptides ဖြစ်ကြသည်။ , 1998a) ။ SB1 အားဖြင့် Hcrt-r334867 များ၏ပိတ်ဆို့အစားအစာစားသုံးမှု (ဟေး et al လျော့နည်းစေပါသည်။ , 2000; ရော့ဂျာ et al ။ , 2001; Ishii et al ။ , 2005), နှင့် Orx / Hcrt system ကိုအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (Nair et al ၏စားသုံးမှုကိုထိန်းညှိအတွက်စုဆောင်းခံရဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ , 2008; Borgland et al ။ , 2009; Choi et al ။ , 2010).
အဆိုပါ Orx / Hcrt system ကိုကောင်းစွာ (သဘာဝ) ဆုလာဘ် function ကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများသော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောတွေ့ရှိချက် Orx / Hcrt စနစ်ကလည်း neurobehavioral နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကဖော်ပြသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှု Orx / Hcrt စနစ်, တကယ်တော့ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူအားဖြင့်ထက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စေ့စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဥပမာအားဖြင့်, Hcrt-r1 သို့မဟုတ် Hcrt-r2 ပိတ်ဆို့ sucrose စားသုံးမှု (Shoblock et al ထက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချတွင်ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ , 2011; Jupp et al ။ , 2011a; ဘရောင်း et al ။ , 2013) ။ ထို့အပြင်ကင်း, အီသနောနှင့်သမားရိုးကျစစ်ကူမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရသော relapse တစ် conditional reinstatement တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သုံးပြီး reinstatement ၏တန်းတူအဆင့်ဆင့်ထုတ်ယူ, Hcrt-r1 ၏ pharmacological ကိုင်တွယ်ရွေးချယ်တဲ့ cocaine- သို့မဟုတ်အီသနော-related နှိုးဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အေးစက် reinstatement ပြောင်းပြန်ပေမယ့် သမားရိုးကျစစ်ကူ (မာတင်-Fardon နှင့် Weiss မှအေးစက်တူညီသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, 2009, 2014a,b; မာတင်-Fardon et al ။ , 2010).
အဆိုပါ PVT မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုအထောက်အကူပြုရန်
အဆိုပါ PVT ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် ventral နှင့် dorsal striatum (ကယ်လီ et al အကြားဆုလာဘ်-related ဆက်သွယ်ရေးတံခါးတို့ Orx / Hcrt-coded တဲ့ key ကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီ။ , 2005) ။ ဤသည် hypothalamic-thalamic-striatal neurocircuitry (ဖြင့်အလားအလာရှိသောအနာဂတ်စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုများအတွက်စွမ်းအင်သိုက်အတွက်ဗဟိုစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များရှည်နှင့်ချက်ချင်းစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံကျော်လွန်နို့တိုက်ကျွေးမှုမြှင့်တင်ရန်ကယ်လီ et al ပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်။ , 2005) ။ ဒါဟာအပြုအမူဆန့်ကျင်အဖြစ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူရန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ Orx / Hcrt စနစ်၏တိုးမြှင့ sensitivity ကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါအရာ, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဤစနစ်၏ maladaptive စုဆောင်းမှု "tilt" အလွန်အကျွံမူးယစ်ညွှန်ကြားအပြုအမူဆီသို့သူ့ရဲ့ function ကိုအကြောင်းတွေးဆနေပါတယ် သဘာဝကဆုလာဘ်ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အများကြီးအထောက်အထား, အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလိုလိုရရှိမှုမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အစပျိုးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement အတွက် PVT များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုထောက်ခံပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်ရှာ၏ context- သို့မဟုတ် cue-သွေးဆောင် reinstatement သိသိသာသာ PVT စုဆောင်းမှု (Wedzony et al နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ , 2003; Dayas et al ။ , 2008; ပယ်ရီနှင့် McNally, 2013) ။ ထို့ပြင် PVT ၏ inactivation (နေသည်နှင့်တူသည် et al ရှာကြံအီသနော၏အခြေအနေတွင်-သွေးဆောင် reinstatement ကာကွယ်ပေးသည်။ , 2009; Marchant et al ။ , 2010), ကိုကင်းချုပ်-သွေးဆောင် reinstatement (ယာကုပ် et al ။ , 2010), ကိုကင်းာင်း (လူငယ်နှင့် Deutch, 1998), နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (အညို et al ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး။ , 2014) ။ ထိုမှတပါး, PVT အာရုံခံကင်း-တွဲ (ဘရောင်း et al မှ reexposure အားဖြင့် activated နေကြသည်။ , 1992; Franklin နှင့် Druhan, 2000), စိတ်ကြွဆေး-တွဲ (Rhodes et al ။ , 2005) နှင့်အီသနော-တွဲ (Wedzony et al ။ , 2003; Dayas et al ။ , 2008sucrose-related လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ PVT activation (Wedzony et al သွေးဆောင်ပါဘူးသော်လည်း) Contextual လှုံ့ဆော်မှု, ။ , 2003).
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ရှိအ PVT တစ်အလှူငွေပြသသောမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီ thalamic နျူကလိယထဲမှာအချက်ပြ Orx / Hcrt ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အလှူငွေမကြာသေးမီကအများကြီးအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PVT ထူထပ် Orx / Hcrt အမျှင် (Kirouac et al အားဖြင့် innervated ဖြစ်ပါတယ်။ , 2005; Parsons et al ။ , 2006) နှင့် Parsons et al (ထို stria terminalis, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏အိပ်ရာနျူကလိယက, နျူကလိယ accumbens မှ glutamatergic afferents ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး, prefrontal cortex medial ။ , 2007; လီများနှင့် Kirouac, 2008; Vertes နှင့်ဟူးဗား, 2008; Hsu နှင့်စျေး, 2009) ။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများတွင်စွဲ၏ neurocircuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက် PVT အတွက် Hcrt-r1 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ယာကုပ် et al ရှာကြံကင်း၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement မဆိုလျော့ချရေးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူးပြသကြ။ , 2011) ဒီဦးနှောက်ဒေသအတွင်း Hcrt-r2 antagonizing အလွဲသုံးစားမှုသက်ရောက်မှု၏မူးယစ်ဆေးပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်ပိုမိုထိရောက်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ဒီယူဆချက်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်အခြားသောလေ့လာမှုများ2(ထို Hcrt-r2 ရန်၏ microinjection ပြခဲ့ကြS)-1-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1Hလီ et al; -) -isoquinolinyl) -3,3-dimethyl-2 [(4-pyridinylmethyl) မိုင်နို] -1-butanone Hydrochloride (TCSOX229) ဒါပေမယ့် PVT သို့ SB334867 မဟုတ်သိသိသာသာ naloxone-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး attenuated ။ , 2011), မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာဖြန်ဖြေအတွက် PVT Hcrt-r2 များအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့အပွငျစူးရှသောနီကိုတင်းသော PVT ဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ကနေစီမံကိန်းကို (Pasumarthi နှင့် Fadel, Orx / Hcrt အာရုံခံအတွက် Fos စကားရပ်တိုးလာ 2008), နီကိုတင်း arousal ၌ဤလမ်းကြောင်း၏ပါဝင်မှုအကြံပြုခြင်း။ အီသနောရှာထဲမှာ PVT ဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှ Orx / Hcrt စီမံကိနျးအတှကျတစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍအရက်-related Contextual တွေကိုကဤအာရုံခံ (Dayas et al ကိုသက်ဝင်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံနေသည်။ , 2008) ။ အထူးသ, ပိုမို Fos-အပြုသဘော hypothalamic Orx / Hcrt အာရုံခံယခင်ကအီသနောရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ် Contextual လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် vs။ ယခင်က Non-ဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲတူလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့ကြွက်များကို၎င်း, အီသနော-related လှုံ့ဆော်မှု Dayas et al (နီးကပ်စွာ Orx / Hcrt အမျှင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ Fos-အပြုသဘော PVT အာရုံခံ၏နံပါတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ , 2008).
အရေးကြီးတာက, အ PVT နို့တိုက်ကျွေးရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွင်ပါဝင်ရန်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PVT ၏ဥပမာအားဖြင့်, တွေ့ရှိရပါသည် (Bhatnagar နှင့် Dallman, 1999) သို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သားတွေနဲ့ PVT အာရုံခံ၏တားစီးA ရန် muscimol (Stratford နှင့် Wirtshafter, 2013) နို့တိုက်ကျွေးရေးတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။ အလားတူ, PVT ၏လျှပ်တွေ့ရှိရပါသည်အစားအစာရရှိရန်ပုံမှန်အားမျှော်လင့်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်တိုးမြှင့်စက်ခေါင်းများနှင့်အသွေးတော် corticosterone အဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးကို attenuation သွေးဆောင် (Nakahara et al ။ , 2004) ။ အစားအစာစားသုံးမှုစည်းမျဉ်း၌ဤ thalamic နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသာအနည်းငယ်ဥပမာကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်ထပ်မံဤပြဿနာကိုဆွေးနွေးပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ အောက်ပါကဏ္ဍများကိုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် PVT (နှင့် Orx / Hcrt ဂီယာ) ၏တိကျသောပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖော်ပြရန်သောဤဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးရန် vs။ သမားရိုးကျစစ်ကူဆီသို့ပုံမှန်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ။
အဆိုပါ PVT differential ကိုကင်းများကစုဆောင်းနေသည် vs။ သဘာဝကဆုလာဘ်: ကင်းရှာနှင့်အတူဆက်စပ်မှု
ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား (မာတင်-Fardon et al ။ , 2013) ကိုကင်း-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် PVT တစ် differential ကိုစုဆောင်းမှုပုံစံသရုပ်ပြထားပါတယ် vs။ အလွန်အရေးပါတယ်လို့သမားရိုးကျစစ်ကူနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှု, နို့ဆီ (SCM) ဒူ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှု (S ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ PVT ၏စုဆောင်းမှုပုံစံထူထောင်ခဲ့သည်D) အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထား relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ကင်းသို့မဟုတ် SCM မှအေးစက် (ဥပမာ Baptista et al ။ , 2004; မာတင်-Fardon et al ။ , 2007, 2009) ။ အတိုချုပ်, အထီး Wistar ကြွက်က S ပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်D အဆိုပါကင်း၏ရရှိမှုသို့မဟုတ် SCM (S နှင့်အတူ+) vs။ ဆားသို့မဟုတ် Non-ဆုလာဘ် (S-) ။ cocaine- နှင့်တုံ့ပြန် SCM-အားဖြည့်များ၏သုဉ်းပြီးနောက်အဆိုပါကြွက်များသက်ဆိုင်ရာ S နဲ့တင်ဆက်ခဲ့ကြ+ သို့မဟုတ်က S- တစ်ဦးတည်း။ အဆိုပါကင်း S ကို၏တင်ဆက်မှု+ သို့မဟုတ် SCM S က+ (သို့သော်မရ non-ဆုလာဘ် S က-အစောပိုင်းလေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း) မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှု Baptista et al (reinstatement ၏တူညီအဆင့်ဆင့်ရူးနှမ်း။ , 2004; မာတင်-Fardon et al ။ , 2007, 2009) ။ ဦးနှောက်ဟာ PVT အတွက် Fos အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်ခံခဲ့ရနှင့် Fos-အပြုသဘောအာရုံခံကင်း S ကအောက်ပါရေတွက်ခဲ့သည်+ သို့မဟုတ် SCM S က+ S ကအောက်ပါရရှိသောအရေအတွက်နှင့်အတူတင်ဆက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်- တင်ပြချက်။ အဆိုပါကင်း S ကို၏တင်ဆက်မှု+ ဒါပေမယ့် S ကို saline မဟုတ်- activated က c-fos ။ နှစ်ဦးစလုံး SCM က S ၏ဆနျ့ကငျြ, တင်ပြချက်+ နှင့် Non-ဆုလာဘ် S က- တူညီအာရုံကြော activation ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ reinstatement တုံ့ပြန်မှုနှင့် PVT အတွက် Fos-အပြုသဘောဆဲလ်အရေအတွက်များအကြားတစ်ဦးကဆက်စပ်မှုကြံစည်မှုအတွက်ကင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်သိသိသာသာဆက်စပ်ထင်ရှားပေမယ့်မ SCM အုပ်စု (မာတင်-Fardon et al ။ , 2013) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ PVT အထူးထပ်မံဒီ thalamic ဖွဲ့စည်းပုံမှာမူးယစ်ဆေးစွဲ circuitry အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအယူအဆ supporting, SCM ရှာရှာကြံသော်လည်းမကင်း၏အေးစက် reinstatement စဉ်အတွင်းစုဆောင်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Pvt အတွက် Orx / Hcrt ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ mediates
အဆိုပါကင်းအုပ်စုတွင်ပေမယ့်မ SCM အုပ်စုတွင်အဆိုပါသိသိသာသာဆက်စပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်းသည့် PVT အတွက် neurotransmission ၏ dysregulation induces ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ လာမယ့်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုကင်းရှာထဲမှာ PVT Orx / Hcrt ဂီယာ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ် vs။ SCM ရှာဆီသို့လှုံ့ဆော်အပြုအမူ။ long-access ကိုကိုကင်း (LgA;2ဇ / နေ့; ဆိုလိုသည်မှာကင်းမှီခို၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်); အထီး Wistar ကြွက် Self-စီမံခန့်ခွဲ Short-access ကိုကိုကင်း (6 ဇ / နေ့ Sha) ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ, ဒါမှမဟုတ် SCM (30 မိ / 21 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းများအတွက်တစ်နေ့လျှင်) နှင့်ထို့နောက် 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်သုဉ်းလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းမဲ့။ အောက်ပါနေ့, ကြွက် Orx-A / Hcrt-1 (0, 0.25, 0.5, 1 နှင့်2μg) ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PVT microinjections လက်ခံရရှိပြီးတော့2ဇများအတွက်သုဉ်းအခြေအနေများအောက်တွင် operating အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့တင်လိုက်တယ်။ Orx-A / Hcrt-1 Sha နှင့် LgA ကင်းရှာကြံနှင့် SCM ရှာကြံပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထိုး-တုံ့ပြန်မှု profile များကိုအတူပြန်လည်ရုတ်သိမ်း။ အဆိုပါ Sha အုပ်စုရှာကြံကင်းအပေါ် Orx-A / Hcrt-1-သွေးဆောင် reinstatement များ၏သက်ရောက်မှုအနိမ့်ဆေးများရှိသော်လည်း reinstatement (Matzeu et al ကိုဆွဲထုတ်မြင့်မားသောဆေးများနှင့်အတူတစ်ဦး inverted ဦး-shaped ထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံခဲ့ရသည်။ , 2013) ။ ဆနျ့ကငျြ, Orx-A / Hcrt-1 မြင့်မားပေမယ့်အနိမ့်မရဆေးများမှာ SCM အုပ်စု reinstatement သွေးဆောင်။ အဆိုပါ Orx-A / Hcrt-1 ထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကို SCM ရှာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှာကြံ Sha ကိုကင်းများ၏ reinstatement အဘို့ရှုလေ့လာခဲ့သည်အတွက်တစ်ဦးကဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ LgA အုပ်စု Orx-A / Hcrt-1-သွေးဆောင် reinstatement သည့် SCM အုပ်စုတစ်စုနှင့် Sha အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာအထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှု function ကိုတစ်လက်ဝဲ-အထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းမှီခို၏သမိုင်းတိုးလာ sensitivity ကို (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီ) ကထင်ဟပ် LH-PVT-Orx / Hcrt ဂီယာ၏ "ာင်း" တွင်ရရှိလာတဲ့သည် PVT များ၏အဆင့်မှာအပြောင်းအလဲများ neuroadaptive မှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပိုမိုဆိုးရွား (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီ) Orx-A / Hcrt-1 ၏သက်ရောက်မှုမှနောက်ထပ်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်ကင်းရှာနှင့်အတူဆက်စပ် neurocircuitry အတွက် PVT ၏တိကျသောပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် Orx / Hcrt-PVT ဂီယာ implicating ။ Orx / Hcrt ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုများစွာသောလူများ၏စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်သည်ဟု သိ. တ PVT သို့ Orx / Hcrt ၏ exogenous အုပ်ချုပ်ရေး nonspecific ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်သိသိသာသာ (ဆိုလိုသည်မှာလျှော့ချ) နဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းငှါအရာ, အေးခဲနေသောနှင့်အပြုအမူမြောကျမတို့တိုးလာဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အမြင့်ဆုံးထိုးထက် 1.5-ခေါက်ပိုမိုမြင့်မားဖို့ဆေးများ 4.5- မှာ Orx-တစ်ဦး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PVT အုပ်ချုပ်ရေးအစီရင်ခံခဲ့သည် (Li က et တုံ့ပြန်အော်ပရေတာ အယ်လ်။ , 2010) ။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက် Orx-တစ်ဦးကအုပ်ချုပ်ရေး (တိုးချဲ့) ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်ရုတ်သိမ်း; ထိုကွောငျ့, မရွေးဆေးထိုးအကွာအဝေးကျော် Orx-တစ်ဦးမတူညီသောအုပ်စုများအတွက်ထုတ်လုပ်မတူညီသောထိုး-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်း "စိတ်ခံစားမှု" အပြုအမူအတွက်မဆို nonspecific အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်မသငျ့သညျ။
စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် compulsive အပြုအမူတွေကိုအခြေခံသော neurotransmission ၏တစ်ဦးက သာ. ကြီးမြတ်နားလည်မှုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက် abstinence ထူထောင်နှင့်ရှည်ရှည်တစ်ဦးထက်ပိုသောပစ်မှတ်နှင့်ထိရောက်မှုနည်းလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စာပေအနေဖြင့်ဒေတာများ Orx / Hcrt-PVT ဂီယာမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအတွက်ထူးခြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းညွှန်ပြ vs။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်ကင်းမှီခို၏သမိုင်း Orx-တစ်ဦးက Prime အကျိုးသက်ရောက်မှုဖို့ PVT ၏ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပါ။ ဒါက PVT နှင့်ရေရှည်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်တကွ, Orx / Hcrt system ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ရှာကြံ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန်ဖြေအတွက်ဦးစားပေးအခန်းကဏ္ဍရရှိသည်ကြောင်းယေဘုယျ dysregulate neurotransmission အတွက်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြံပြု vs။ သဘာဝကဆုလာဘ်ရှာ။ အဘယ်အရာကိုရှင်းလင်းခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ Orx / Hcrt-PVT ဂီယာ၏ဤ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုနောက်ကွယ်မှ neuromechanisms ဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းအယူအဆအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတစ်သမိုင်း PVT ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက် Orx / Hcrt ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးအပြောင်းအလဲတချို့အတွက်အတွက် Orx / Hcrt အဲဒီ receptor စကားရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအားဖြင့်ထင်ဟပ်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus-Orx / Hcrt-PVT neurotransmission ၏ dysregulation induces သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အလှည့် PVT activation နှင့်ကိုကင်း-ရှာအပြုအမူအကြားဆက်စပ်မှုများကထင်ဟပ်နေသည်။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သမိုင်းအစအလှည့်အတွက်အလွန်အကျွံမူးယစ်ညွှန်ကြားအပြုအမူဆီသို့၎င်း၏ "ပုံမှန်" function ကို perturbs သော PVT အတွက် neuroadaptations (ဥပမာတိုးမြှင် Synaptic အစှမျးသတ်တိ) သွေးဆောင်လိမ့်မည်။
metabotropic အချိုမှု receptors များအတွက်အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ postdependent တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အပြောင်းအလဲ Aujla et al ((ဥပမာ Hcrt-r ကိုရန်) postdependent တစ်ဦးချင်းစီအတွက် relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏အရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက pharmacological tool များ၏သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ်။ , 2008; Hao က et al ။ , 2010; Sidhpura et al ။ , 2010; Kufahl et al ။ , 2011) နှင့် nociceptin သည့်စနစ် (ဥပမာ Economidou et al ။ , 2008; မာတင်-Fardon et al ။ , 2010; Aujla et al ။ , 2013) နှင့်ထိုအသက်ရောက်မှုများ PVT ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စာပေနှင့်အချက်အလက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယခင်ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရယန္တရား, မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ဝတ္ထုကုထုံးပစ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီရသောမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏ etiology အတွက် Orx / Hcrt-PVT ဂီယာ, ၏အမည်ရသည့် dysregulation ထောက်ခံပါတယ်။
ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 25036 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသန NIH / NIDA ထောက်ပံ့ငွေ DA033344 (Remi မာတင်-Fardon) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူအကူအညီအတွက်အမ် Arends ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ammoun အက်စ်, Holmqvist တီ, Shariatmadari R. , Oonk HB, Detheux အမ်, Parmentier အမ်, et al ။ (2003) ။ orexin peptides အားဖြင့် OX1 နှင့် OX2 receptors ၏ကွဲပြားအသိအမှတ်ပြုမှု။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 305, 507-514 10.1124 / jpet.102.048025 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Aston-Jones ဟာဂျီ, Smith က RJ, Sartor GC, Moorman DE, Massi L. , Tahsili-Fahadan P. ။ (2010) ။ lateral hypothalamic orexin / hypocretin အာရုံခံ: ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်းတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 1314, 74-90 10.1016 / j.brainres.2009.09.106 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aujla အိပ်ချ်, Cannarsa R. , Romualdi P. , Ciccocioppo R. မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2013) ။ nociceptin / orphanin FQ (N / OFQ) နှင့်အီသနောဆုတ်ခွာအောက်ပါ -N / OFQ-NOP ဗီဇစကားရပ်အတွက်အချိန်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများပြုပြင်မွမ်းမံ။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 18, 467-479 10.1111 / j.1369-1600.2012.00466.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aujla အိပ်ချ်, မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2008) ။ ကိုကင်းပြပွဲမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက် abstinence စဉ်အတွင်း mGluR2/3agonist LY379268 ၏ anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများမှစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Neuropsychopharmacology 33, 1818-1826 10.1038 / sj.npp.1301588 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baldo BA ဘွဲ့, ဒံယေလ RA, Berridge CW, ကယ်လီ AE (2003) ။ orexin / hypocretin- ၏ထပ်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် arousal, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဖိစီးမှုကိုဖြန်ဖြေကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine-beta-hydroxylase immunoreactive အမျှင်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 464, 220-237 10.1002 / cne.10783 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baptista MA, မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2004) ။ မူလတန်းအားဖြည့်နှိုင်းယှဉ် conditional reinstatement အပေါ် metabotropic အချိုမှု2/3အဲဒီ receptor agonist LY379268 ၏ဦးစားပေးသက်ရောက်မှု: ကိုကင်းနှင့်အစွမ်းထက်သမားရိုးကျစစ်ကူများအကြားနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 4723-4727 10.1523 / jneurosci.0176-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bayerlein K. , Kraus တီ, Leinonen ဗြဲ, Pilniok ဃ, Rotter အေ, Hofner ခ, et al ။ (2011) ။ စူးရှခြင်းနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာနှိုင်းယှဉ်အရက်သေစာမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦးကစကားရပ်နှင့်ကမကထ methylation Orexin ။ အရက် 45, 541-547 10.1016 / j.alcohol.2011.02.306 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘီးလင်းဃ, Everitt BJ (2008) ။ အလေ့အထများကိုရှာကြံကင်းသည့် dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 57, 432-441 10.1016 / j.neuron.2007.12.019 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bentivoglio အမ်, Balercia G. အ, Kruger L. (1991) ။ အဆိုပါ nonspecific thalamus ၏တိကျသော: အ midline အရေးပါ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 87, 53-80 10.1016 / s0079-6123 (08) 63047-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berendse HW, Groenewegen HJ (1990) ။ အဆိုပါ ventral striatum အပေါ်အထူးအလေးပေးအတူကြွက်များတွင် thalamostriatal စီမံကိန်း၏အဖွဲ့အစည်း။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 299, 187-228 10.1002 / cne.902990206 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berendse HW, Groenewegen HJ (1991) ။ ကြွက်များတွင် midline နှင့် intralaminar thalamic အရေးပါ၏ကန့်သတ် cortical ရပ်စဲလယ်ကွင်း။ neuroscience 42, 73-102 10.1016 / 0306-4522 (91) 90151-ဃ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bhatnagar အက်စ်, Dallman အမ် (1998) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဝတ္ထုဖိအား hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီဘို့အ Neuroanatomical အခြေခံ။ neuroscience 84, 1025-1039 10.1016 / s0306-4522 (97) 00577-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bhatnagar အက်စ်, Dallman MF (1999) ။ အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတစ်ဦး State-မှီခိုထုံးစံ၌ core ကိုအပူချိန်နှင့်စွမ်းအင်ဟန်ချက်အတွက် rhythms ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 851, 66-75 10.1016 / s0006-8993 (99) 02108-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bonci အေ, Borgland အက်စ် (2009) ။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်မူးယစ်ဆေး-မှီခို Synaptic plasticity ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် orexin / hypocretin နှင့် CRF ၏အခန်းက္ပ။ Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 107-111 10.1016 / j.neuropharm.2008.07.024 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Borgland SL, Chang SJ, Bower က MS, et al Thompson က JL, Vittoz N. , Floresco SB ။ (2009) ။ Orexin A / hypocretin-1 ရွေးချယ်အပြုသဘောစစ်ကူများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအားပေးအားမြှောက်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 11215-11225 10.1523 / jneurosci.6096-08.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti အက်ဖ်, Fields HL, Bonci အေ (2006) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 49, 589-601 10.1016 / j.neuron.2006.01.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boutrel ခ, Kenny PJ, Specio SE, မာတင်-Fardon et al R. , Markou အေ, Koob gf ။ (2005) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin များအတွက်အခန်းက္ပ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 102, 19168-19173 10.1073 / pnas.0507480102 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brog JS, Salyapongse အေ, Deutch AY, Zahm DS (1993) ။ retrogradely ပို့ဆောင် fluoro-ရွှေ immunohistochemical ထောက်လှမ်း: ကြွက် ventral striatum ၏ "accumbens" စိတျအပိုငျးအတွက် core နဲ့ shell ကို၏ afferent innervation များ၏ပုံစံများ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 338, 255-278 10.1002 / cne.903380209 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘရောင်း EE, Robertson က GS, Fibiger HC (1992) ။ တစ်ဦးကိုကင်း-တွဲပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့အောက်ပါခြွင်းချက်အာရုံခံ activation အဘို့သက်သေအထောက်အထား: forebrain limbic အဆောက်အဦများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 4112-4121 [PubMed]
ဘရောင်း RM, Khoo SY, လောရင့် AJ (2013) ။ ဗဟို orexin (hypocretin)2အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအီသနော- သာ. နှစ်သက်ကြွက်အတွက်, cue-အေးစက်အီသနော-ရှာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပေမယ့်မပေး။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 16, 2067-2079 10.1017 / s1461145713000333 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောင်နင်း JR, Jansen HT, Sorg BA (2014) ။ အဆိုပါ paraventricular thalamus ၏ Inactivation ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး abolishes ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 134, 387-390 10.1016 / j.drugalcdep.2013.09.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bubser အမ်, Deutch AY (1998) ။ Thalamic paraventricular နျူကလိယတွင် neuron အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens innervate မှ collateralize ။ ဦးနှောက် Res ။ 787, 304-310 10.1016 / s0006-8993 (97) 01373-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bubser အမ်, Deutch AY က (1999) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသည် limbic forebrain sites များအား innervate လုပ်သော thalamic paraventricular နျူကလိယ၏အာရုံခံတွင် Fos ဟူသောစကားရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Synapse 32, 13-22 10.1002 / (sici) 1098-2396 (199904) 32: 1 <13 :: အကူအညီ-syn2> 3.0.co; 2-r ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမဂျေ, Everitt BJ (2002) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 26, 321-352 10.1016 / s0149-7634 (02) 00007-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen ကအက်စ်, စု HS (1990) ။ Fluoro-ရွှေ iontophoretic လျှောက်လွှာနှင့်အတူကြွက်-တစ် retrograde သဲလွန်စလေ့လာမှုအတွက် thalamic paraventricular နှင့် parataenial အရေးပါ၏ Afferent ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 522, 1-6 10.1016 / 0006-8993 (90) 91570-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cornwall ဂျေ, Phillipson OT (1988a) ။ retrograde lectin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-ငါအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက်များ၏ dorsal thalamus မှ Afferent စီမံကိန်းများ။ အဆိုပါ mediodorsal နျူကလိယ။ neuroscience 24, 1035-1049 10.1016 / 0306-4522 (88) 90085-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cornwall ဂျေ, Phillipson OT (1988b) ။ retrograde lectin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက်များ၏ dorsal thalamus မှ Afferent စီမံကိန်းများ။ II ကို။ အဆိုပါ midline အရေးပါ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 21, 147-161 10.1016 / 0361-9230 (88) 90227-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al နေ့စွဲ Y. , Ueta Y. , Yamashita အိပ်ချ်, ယာမာဂူချီအိပ်ချ်, Matsukura အက်စ်, Kangawa K. ။ (1999) ။ Orexins, orexigenic hypothalamic peptides, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, neuroendocrine နှင့် neuroregulatory စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 96, 748-753 10.1073 / pnas.96.2.748 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dayas CV ကို, McGranahan TM, မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2008) ။ အီသနောရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှု relapse တစ် reinstatement မော်ဒယ်အတွက် hypothalamic လှည်းနှင့် orexin အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 152-157 10.1016 / j.biopsych.2007.02.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
က de Lecea L. (2012) ။ Hypocretins နှင့်အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားယန္တရားများ၏ neurobiology ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 198, 15-24 10.1016 / b978-0-444-59489-1.00003-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Lecea L. , Kilduff TS, Peyron C. , Gao X တို့မှာ, Foye PE, Danielson PE, က de ။ (1998) ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 95, 322-327 10.1073 / pnas.95.1.322 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Economidou ဃ, Hansson AC အ, Weiss အက်ဖ်, Terasmaa အေ, Sommer WH, Cippitelli အေ, et al ။ (2008) ။ nociceptin ၏ Dysregulation / အဆိုပါ amygdala အတွက် orphanin FQ လှုပ်ရှားမှုကြွက်များတွင်အလွန်အကျွံအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 64, 211-218 10.1016 / j.biopsych.2008.02.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Edwards က CM, Abusnana အက်စ်, Sunter ဃ, မာဖီကီလိုဂရမ်, Ghatei MA, Bloom SR (1999) ။ အစားအစာစားသုံးမှုအပေါ် orexins ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: neuropeptide Y ကို, melanin-အာရုံဟော်မုန်းနှင့် galanin နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ Endocrinol ။ 160, R7-R12 10.1677 / joe.0.160r007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Espana RA, Melchior JR, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR (2011) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Hypocretin 1 / orexin တစ်ဦးကင်းမှ dopamine တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။ Psychopharmacology (Berl) 214, 415-426 10.1007 / s00213-010-2048-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Espana RA, Oleson eb, ဂျွန်လော့ခ် JL, Brookshire BR, ရောဘတ်, DC, ဂျုံးစ် SR (2010) ။ အဆိုပါ hypocretin-orexin စနစ် mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင်လုပ်ရပ်များကနေတဆင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းညှိ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 336-348 10.1111 / j.1460-9568.2009.07065.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, Dickinson အေ, Robbins TW (2001) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 36, 129-138 10.1016 / s0165-0173 (01) 00088-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Franklin TR, Druhan JP (2000) ။ တစ်ဦးကိုကင်း-တွဲပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ဆက်စပ်နေသောဒေသများရှိ Fos-related antigen ၏ expression ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 2097-2106 10.1046 / j.1460-9568.2000.00071.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖရီးမနျး LJ, Cassell MD (1994) ။ အဆိုပါ midline thalamus ၏ peptidergic innervation မှ thalamic Basal forebrain projection အာရုံခံ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 348, 321-342 10.1002 / cne.903480302 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Georgescu ဃ, Zachary V. , Barrot အမ်, Mieda အမ်, ဝီလီ JT, Eisch AJ, et al ။ (2003) ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic peptide orexin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 3106-3111 [PubMed]
စတိန်း RZ, Volkow ND (2002) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 159, 1642-1652 10.1176 / appi.ajp.159.10.1642 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gotter AL, Webber AL, Coleman PJ, Renger JJ, Winrow CJ (2012) ။ အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ။ LXXXVI ။ Orexin အဲဒီ receptor function ကို, nomenclature နှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacol ။ ဗျာ 64, 389-420 10.1124 / pr.111.005546 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gozzi အေ, Turrini G. အ, Piccoli L. , Massagrande အမ်, Amantini ဃ, Antolini အမ်, et al ။ (2011) ။ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် orexin-1 နှင့် orexin-2 အဲဒီ receptor ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအလွှာဖော်ပြသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ 6: e16406 10.1371 / journal.pone.0016406 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Groenewegen HJ, Berendse HW (1994) ။ ကို 'nonspecific' 'midline နှင့် intralaminar thalamic အရေးပါ၏သတ်မှတ်ချက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 17, 52-57 10.1016 / 0166-2236 (94) 90074-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နေသည်နှင့်တူသည် AS, Clemens KJ, Choi EA ၏, McNally မိသားစုဆရာဝန် (2009) ။ Paraventricular thalamus ငြိမ်းအေးဆုလာဘ်ရှာ၏အခြေအနေတွင်-သွေးဆောင် reinstatement (သက်တမ်းတိုး) mediates ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 802-812 10.1111 / j.1460-9568.2009.06623.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hao က Y. မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2010) ။ အမူအကျင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ metabotropic အချိုမှု receptor2/3၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုကင်း-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်များတွင် metabotropic အချိုမှု receptor5dysregulation: မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်အချက်တစ်ချက်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 68, 240-248 10.1016 / j.biopsych.2010.02.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟေး AC အ, ချပ်မန်းအိပ်ချ်, တေလာ C. , Moore က GB ကို, Cawthorne MA, Tadayyon အမ်, et al ။ (2002) ။ Anorectic, ob / ob ကြွက်တစ်ဦးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်၏ thermogenic နဲ့ anti-အဝလွန်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု။ စည်းမျဉ်းများ။ Pept ။ 104, 153-159 10.1016 / s0167-0115 (01) 00358-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holland ဂျာလူးဆိုးကျိုး, ကင်မရွန် MD, Kamenecka TM, Kenny PJ (2008) ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် hypocretin ဂီယာနီကိုတင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 105, 19480-19485 10.1073 / pnas.0808023105 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hsu ၎င်းကို, စျေး JL (2009) ။ Paraventricular thalamic နျူကလိယ: serotonin, orexin နှင့်ဟာ Macaque မျောက်အတွက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအားဖြင့် subcortical ဆက်သွယ်မှုများနှင့် innervation ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 512, 825-848 10.1002 / cne.21934 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hutcheson DM, Quarta ဃ, Halbout ခ, Rigal အေ, Valerio အီး, Heidbreder C. (2011) ။ Orexin-1 အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 ကင်း-အေးစက်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး-အေးစက်ဆုလာဘ်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်လျော့နည်းစေသည်။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 22, 173-181 10.1097 / fbp.0b013e328343d761 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ishii Y. , ဒဲလ် je, Halford JC, Upton N. , Porter R. , Johns အေ, et al ။ (2005) ။ orexin-24 အဲဒီ receptor ရန် SB-1 နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးကုသမှုကိုအောက်ပါအထီးကြွက် 334867 ဇအတွက် Anorexia နှင့်အလေးချိန်အရှုံး။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 157, 331-341 10.1016 / j.bbr.2004.07.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ito က R. , Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ (2002) ။ မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ် cue များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 6247-6253 [PubMed]
Jaferi အေ, Nowak N. , Bhatnagar အက်စ် (2003) ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကြွက်များတွင်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို: အ posterior paraventricular thalamus ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 78, 365-373 10.1016 / s0031-9384 (03) 00014-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျိမ်း MH, Charnley JL, ဂျုံးစ်အီး, လေဝိ EM, Yeoh JW, Flynn က JR, et al ။ (2010) ။ Cocaine- နှင့် paraventricular thalamus အတွင်းအချက်ပြစိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း (လှည်း) ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ modulates ။ PLoS တစ်ခုမှာ 5: e12980 10.1371 / journal.pone.0012980 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျိမ်း MH, Charnley JL, လေဝိ EM, ဂျုံးစ်အီး, Yeoh JW, Smith က DW, et al ။ (2011) ။ အဆိုပါ paraventricular thalamus အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအချက်ပြပေမယ့်မပေး Orexin-1 အဲဒီ receptor, ကိုကင်း-ရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement ထိန်းညှိဖို့အရေးကြီးသည်။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 14, 684-690 10.1017 / s1461145711000423 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jupp ခ, Krivdic ခ, Krstew အီး, လောရင့် AJ (2011a) ။ အဆိုပါ orexin အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 ကြွက်များတွင်အရက်နှင့်အ sucrose များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ dissociates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1391, 54-59 10.1016 / j.brainres.2011.03.045 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jupp ခ, Krstew အီး, Dezsi G. အ, လောရင့် AJ (2011b) ။ discrete cue-အေးစက်အရက်-ရှာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနေကြပြီး: အာရုံကြော activation နှင့် orexin receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ပုံစံ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 162, 880-889 10.1111 / j.1476-5381.2010.01088.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Volkow ND (2005) ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 162, 1403-1413 10.1176 / appi.ajp.162.8.1403 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကယ်လီ AE, Baldo BA, Pratt WE (2005) ။ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, arousal နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထား hypothalamic-thalamic-striatal ဝင်ရိုး။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 493, 72-85 10.1002 / cne.20769 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကယ်လီ AE, Berridge KC (2002) ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 3306-3311 [PubMed]
Kirouac GJ, Parsons အမတ်လီအက်စ် (2005) ။ Orexin အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ (hypocretin) innervation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1059, 179-188 10.1016 / j.brainres.2005.08.035 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kirouac GJ, Parsons အမတ်လီအက်စ် (2006) ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏အာရုံခံ် cocaine- နှင့်စိတ်ကြွဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှတ်တမ်း (လှည်း) ကနေ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ Innervation ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 497, 155-165 10.1002 / cne.20971 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Krout Ke, Belzer RE, Loewy အေဒီ (2002) ။ ကြွက်၏ thalamic အရေးပါ midline နှင့် intralaminar ဖို့ပရိုဂျက် Brainstem ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 448, 53-101 10.1002 / cne.10236 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Krout KE, Loewy အေဒီ (၂၀၀၀) ။ ကြွက်၏ midline နှင့် intralaminar thalamic အရေးပါဖို့ Parabrachial နျူကလိယစီမံကိန်း။ ဂျေ Comp ။ Neurol ။ 2000, 428-475 494 / 10.1002-1096 (9861) 20001218: 428 <3 :: AID-CNE475> 6.CO; 3.0-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kufahl PR စနစ်, မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2011) ။ အဆိုပါ mGluR2/3agonist LY379268 အားဖြင့် conditional reinstatement ၏ကို attenuation မှ sensitivity ကို Enhanced နှင့်အီသနောမှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင် mGluR2/3၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Neuropsychopharmacology 36, 2762-2773 10.1038 / npp.2011.174 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kukkonen JP (2013) ။ အဆိုပါ orexinergic / hypocretinergic စနစ်၏ဇီဝကမ္မဗေဒ: 2012 အတွက်ပြန်လည်လည်ပတ်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ cell Physiol ။ 304, C2-C32 10.1152 / ajpcell.00227.2012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လောရင့် AJ, Cowen က MS, ယန် HJ, Chen ကအက်ဖ်, Oldfield ခ (2006) ။ အဆိုပါ orexin system ကိုကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံထိန်းညှိ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 148, 752-759 10.1038 / sj.bjp.0706789 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Leshner AI အ (1997) ။ စွဲလမ်းနေတဲ့ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်ပါသည်ကြောင့်အရေးပါပါတယ်။ သိပ္ပံ 278, 45-47 10.1126 / science.278.5335.45 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီအက်စ်, Kirouac GJ (2008) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အပေါ်အထူးအလေးပေးအတူ forebrain ဖို့ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယကနေ projections ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 506, 263-287 10.1002 / cne.21502 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီ Y. လီအက်စ်, ဝေ C. , ဝမ်အိပ်ချ်, Sui ကို N. , Kirouac GJ (2010) ။ အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် microinjections orexin ထုတ်လုပ်စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 95, 121-128 10.1016 / j.pbb.2009.12.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီ Y. , ဝမ်အိပ်ချ်, Qi K. , Chen က X တို့မှာလီအက်စ်, Sui ကို N. , et al ။ (2011) ။ အဆိုပါ midline thalamus အတွက် Orexins မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာဖို့အခွအေနေအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 102, 42-50 10.1016 / j.physbeh.2010.10.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
lu XY, Bagnol ဃ, Burke ကအက်စ်, Akil အိပ်ချ်, Watson ဟာ SJ (2000) ။ အစာရှောင်ခြင်းအပျေါမှာဦးနှောက်ထဲမှာ OX1 နှင့် OX2 orexin / hypocretin အဲဒီ receptor messenger ကိုအာအန်အေ၏ differential ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်း။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 37, 335-344 10.1006 / hbeh.2000.1584 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marchant NJ, ဖာလုံ TM, McNally မိသားစုဆရာဝန် (2010) ။ Medial dorsal hypothalamus သုဉ်းပြီးနောက်ဆုလာဘ်ရှာ၏တားစီး mediates ။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 14102-14115 10.1523 / jneurosci.4079-10.2010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်-Fardon R. , Baptista MA, Dayas CV ကို, Weiss အက်ဖ် (2009) ။ MTEP များ၏သက်ရောက်မှုများ Dissociation [3 - [(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl) ethynyl] piperidine] conditional reinstatement နှင့်အားဖြည့်အပေါ်: ကိုကင်းနှင့်သမားရိုးကျစစ်ကူများအကြားနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 329, 1084-1090 10.1124 / jpet.109.151357 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်-Fardon R. , Matzeu အေ, Cauvi G. အ, Weiss အက်ဖ် (2013) ။ ကိုကင်းရှာနှင့်အတူဆက်စပ်: အ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ differential သဘာဝကဆုလာဘ် vs. ကိုကင်းများကစုဆောင်းနေပါတယ်။ Program ကိုအမှတ် 350.14 ။ 2013 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner က San Diego မှ,, CA: အာရုံကြောသိပ္ပံ 2013, အွန်လိုင်းများအတွက် Society က။
မာတင်-Fardon R. , Maurice တီ, Aujla အိပ်ချ်, Bowen တို့ WD, Weiss အက်ဖ် (2007) ။ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်သဘာဆုလာဘ် vs ကိုကင်းများကလှုံ့ဆော် conditional reinstatement အပေါ် sigma1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology 32, 1967-1973 10.1038 / sj.npp.1301323 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2009) ။ အရေးပါတယ်လို့သဘာဝကဆုလာဘ် vs. ကင်းမှအေးစက်တစ် cue အားဖြင့်သွေးဆောင် reinstatement တခုတခုအပေါ်မှာ Orx / Hcrt ရန်၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Program ကိုအမှတ် 65.21 ။ 2009 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner ကချီကာဂို, IL: အာရုံကြောသိပ္ပံ, 2009 များအတွက် Society က။ အွန်လိုင်း။
မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2014a) ။ hypocretin အဲဒီ receptor-1 ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဦးစားကင်းရှာကာကွယ်ပေးသည်: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်ရှာနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ Neuroreport [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ 10.1097 / wnr.0000000000000120 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်-Fardon R. , Weiss အက်ဖ် (2014b) ။ n- (2-methyl-6-benzoxazolyl) -N'-1,5-naphthyridin-4-yl ယူရီးယား (SB334867), တစ်ဦး hypocretin အဲဒီ receptor-1 ရန်, ဦးစားအီသနောရှာကာကွယ်ပေးသည်: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်ရှာနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 19, 233-236 10.1111 / j.1369-1600.2012.00480.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်-Fardon R. , Zorrilla EP, Ciccocioppo R. , Weiss အက်ဖ် (2010) ။ corticotropin-releasing အချက်အပေါ်အာရုံစိုက်, nociceptin / orphanin FQ နှင့် orexin / hypocretin: စွဲအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုနှင့် arousal စနစ်များပင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် dysregulation ၏အခန်းက္ပ။ ဦးနှောက် Res ။ 1314, 145-161 10.1016 / j.brainres.2009.12.027 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Matzeu အေ, Kerr တီ, Weiss အက်ဖ်မာတင်-Fardon R. (2013) ။ အဆိုပါ thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် Orexin / hypocretin ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ mediates ။ Program ကိုအမှတ် 350.19 ။ 2013 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner က San Diego မှ,, CA: အာရုံကြောသိပ္ပံ 2013, အွန်လိုင်းများအတွက် Society က။
McFarland K. , Kalivas PW (2001) ။ အဆိုပါ circuitry မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေ။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 8655-8663 [PubMed]
McLellan ကို AT, Lewis က, DC, O 'Brien က CP, Kleber HD ကို (2000) ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုတစ်နာတာရှည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်း: ကုသမှု, အာမခံနှင့်ရလဒ်အကဲဖြတ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ ဂျေအေအမ်အေ 284, 1689-1695 10.1001 / jama.284.13.1689 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Moga MM, Weis RP, Moore က RY (1995) ။ ကြွက်များတွင် paraventricular thalamic နျူကလိယ၏ Efferent စီမံကိန်းများ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 359, 221-238 10.1002 / cne.903590204 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nair စင်ကာပူဒေါ်လာ, ရွှေလုပ် SA, Shaham Y. (2008) ။ High-အဆီအစားအစာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအစားအစာ reinstatement အပေါ် hypocretin 1 အဲဒီ receptor ရန် SB 334867 ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 154, 406-416 10.1038 / sj.bjp.0707695 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nakahara K. , Fukui K. , Murakami N. (2004) ။ ကြွက်များတွင်အစားအသောက်ကန့်သတ်အောက်ရှိ anticipatory တုံ့ပြန်မှုအတွက် thalamic paraventricular နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ VET ။ Med ။ သိပ္ပံ။ 66, 1297-1300 10.1292 / jvms.66.1297 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nambu တီ, Sakurai တီ, Mizukami K. , Hosoya Y. , Yanagisawa အမ်, Goto K. (1999) ။ အရွယ်ရောက်သူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အာရုံခံ၏ဖြန့်ဝေ။ ဦးနှောက် Res ။ 827, 243-260 10.1016 / s0006-8993 (99) 01336-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Novak CM, Harris ကဂျာ Smale L. , Nunez AA ကို (2000a) ။ nocturnal ကြွက် (Rattus norvegicus) နှင့် diurnal နိုင်းလ်မြက်ကြွက်များတွင် paraventricular thalamic နျူကလိယ (Arviacanthis niloticus) မှ Suprachiasmatic နျူကလိယစီမံကိန်းများ။ ဦးနှောက် Res ။ 874, 147-157 10.1016 / s0006-8993 (00) 02572-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Novak CM, Nunez AA ကို (1998) ။ ကြွက် ventrolateral preoptic ဧရိယာနှင့် midline thalamic အရေးပါအတွက် Fos လှုပ်ရှားမှုအတွင်းနေ့စဉ် rhythms ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ 275, R1620-R1626 [PubMed]
Novak CM, Smale L. , Nunez AA ကို (2000b) ။ အဆိုပါ diurnal Arvicanthis niloticus အတွက်အိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာမှ related ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် Fos စကားရပ်ထဲမှာ rhythms ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol ။ 278, R1267-R1274 [PubMed]
O 'Brien က CP, Childress AR, Ehrman R. , Robbins SJ (1998) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် conditioning အချက်များ: သူတို့မလှူရှင်းပြနိုင်မလဲ? ဂျေ Psychopharmacol ။ 12, 15-22 10.1177 / 026988119801200103 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O 'Brien က CP, McLellan ကို AT (1996) ။ စွဲလမ်း၏ကုသမှုအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 347, 237-240 10.1016 / s0140-6736 (96) 90409-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otake K. (2005) ။ Cholecystokinin နှင့်ကြွက်များတွင် paraventricular thalamic နျူကလိယမှပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​immunoreactive စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ res ။ 51, 383-394 10.1016 / j.neures.2004.12.009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otake K. , Kin K. , Nakamura Y. (2002) ။ ရွေ့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါကြွက် midline thalamus မှ afferents အတွက် Fos စကားရပ်။ neuroscience ။ res ။ 43, 269-282 10.1016 / s0168-0102 (02) 00042-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Otake K. , Nakamura Y. (1998) ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့်ကြွက်များတွင် prefrontal cortex နှစ်ဦးစလုံးမှထုတ်လုပ်တဲ့လူပျို midline thalamic အာရုံခံ။ neuroscience 86, 635-649 10.1016 / s0306-4522 (98) 00062-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Parsons အမတ်လီအက်စ်, Kirouac GJ (2006) ။ အဆိုပါ orexin နှင့်လှည်း peptides နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအကြားတစ်ဦးကို interface အဖြစ် thalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ။ synapses 59, 480-490 10.1002 / syn.20264 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Parsons အမတ်လီအက်စ်, Kirouac GJ (2007) ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ thalamus နှင့် dopamine အမျှင်များ၏ paraventricular နျူကလိယအကြား functional နှင့်ခန္ဓာဗေဒကွန်နက်ရှင်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 500, 1050-1063 10.1002 / cne.21224 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pasumarthi RK, Fadel ဂျေ (2008) ။ စူးရှသောနီကိုတင်းအားဖြင့် Basal forebrain နှင့် paraventricular thalamus မှ orexin / hypocretin စီမံကိန်း၏ activation ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 77, 367-373 10.1016 / j.brainresbull.2008.09.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pasumarthi RK, Reznikov LR, Fadel ဂျေ (2006) ။ စူးရှသောနီကိုတင်းအားဖြင့် orexin အာရုံခံ၏ activation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 535, 172-176 10.1016 / j.ejphar.2006.02.021 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖုန်ကြားရှင် ZC, Bentivoglio အမ် (2004) ။ အဆိုပါ thalamic paraventricular နျူကလိယဟာ amygdala ဖို့ suprachiasmatic နျူကလိယမှသတင်းအချက်အလက်ထပ်ဆင့်လွှင်: အလငျးနှငျ့အီလက်ထရွန်ဏုအဆင့်ဆင့်မှာကြွက်များတွင်ပေါင်းစပ် anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စလေ့လာမှု။ ဂျေ Neurocytol ။ 33, 101-116 10.1023 / b: neur.0000029651.51195.f9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖုန်ကြားရှင် ZC, စိမျးလနျး-Zucconi G. အ, Bentivoglio အမ် (1995) ။ ကြွက် thalamus ၏ midline paraventricular နျူကလိယအတွက် Fos-related ပရိုတိန်းစကားရပ်: limbic efferents နှင့်အတူ Basal လှိုနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ Exp ။ ဦးနှောက် Res ။ 104, 21-29 10.1007 / bf00229852 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pennartz CM, Groenewegen HJ, Lopes da Silva FH (1994) ။ , အမူအကျင့် electrophysiological နှင့်ခန္ဓာဗေဒအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးပေါင်းစည်းမှု: အဆိုပါနျူကလိယ function ကွဲပြားအာရုံခံ ensembles တစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ် accumbens ။ prog ။ Neurobiol ။ 42, 719-761 10.1016 / 0301-0082 (94) 90025-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပယ်ရီ CJ, McNally မိသားစုဆရာဝန် (2013) ။ context-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်အရက်ရှာ၏ Prime reinstatement အတွက် ventral pallidum တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 38, 2762-2773 10.1111 / ejn.12283 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပီယပ် RC, Vanderschuren LJ (2010) ။ အလေ့အကျင့်ကန်: ကိုကင်းစွဲထဲမှာအရိုးစွဲအမူအကျင့်များအာရုံကြောအခြေခံ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 35, 212-219 10.1016 / j.neubiorev.2010.01.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပလာဇာ-Zabala အေမာတင်-Garcia ကအီး, က de Lecea L. , Maldonado R. , Berrendero အက်ဖ် (2010) ။ Hypocretins နီကိုတင်း၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထိန်းညှိခြင်းနှင့်နီကိုတင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement သွေးဆောင်။ ဂျေ neuroscience ။ 30, 2300-2310 10.1523 / jneurosci.5724-09.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Quarta ဃ, Valerio အီး, Hutcheson DM, Hedou G. အ, Heidbreder C. (2010) ။ အဆိုပါ orexin-1 အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး-evoked dopamine ထွက်သွားလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးလျော့နည်းစေပါသည်။ Neurochem ။ int ။ 56, 11-15 10.1016 / j.neuint.2009.08.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rhodes JS, Ryabinin AE, Crabbe JC (2005) ။ ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ Contextual အေးစက်နဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 119, 759-771 10.1037 / 0735-7044.119.3.759 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Richards JK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Steensland P. , Taha လုပ် SA, Borgland SL, Bonci အေ, et al ။ (2008) ။ orexin-1 / hypocretin-1 receptors ၏တားစီးအီသနောနဲ့ Long-အီဗန်ကြွက်များတွင်ရှာကြံ sucrose ၏ yohimbine-သွေးဆောင် reinstatement ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 199, 109-117 10.1007 / s00213-008-1136-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော့ဂျာ RJ, Halford JC, Nunes က de Souza RL, Canto က de Souza AL, Piper, DC, Arch JR, et al ။ (2001) ။ SB-334867 တစ်ဦးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်, အမူအကျင့်မွတ်မပြေနိုင်သောနှင့်လုပ်ကွက်ကြွက်များတွင် orexin-တစ်ဦး၏ hyperphagic အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 13, 1444-1452 10.1046 / j.0953-816x.2001.01518.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ruggiero DA, အန်ဝါအက်စ်ကင်မ်ဂျေ, Glickstein SB (1998) ။ အဆိုပါ thalamus နှင့် olfactory tubercle မှ Visceral afferent လမ်းကြောင်း: အပြုအမူဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Res ။ 799, 159-171 10.1016 / s0006-8993 (98) 00442-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakurai တီ, Amemiya အေ, Ishii အမ်, Matsuzaki ဗြဲ, Chemelli RM, Tanaka အိပ်ချ်, et al ။ (1998a) ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell 92, 573-585 10.1016 / s0092-8674 (00) 80949-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakurai တီ, Amemiya အေ, Ishii အမ်, Matsuzaki ဗြဲ, Chemelli RM, Tanaka အိပ်ချ်, et al ။ (1998b) ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell 92, 1-697 10.1016 / S0092-8674 (02) 09256-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakurai တီ, Nagata R. , Yamanaka အေ, Kawamura အိပ်ချ်, Tsujino N. , Muraki Y. , et al ။ (2005) ။ ကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇကုဒ်သွင်း tracer အားဖြင့်ထင်ရှား orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ input ။ အာရုံခံဆဲလျ 46, 297-308 10.1016 / j.neuron.2005.03.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sartor GC, Aston-Jones က GS (2012) ။ တစ်ဦးက septal-hypothalamic လမ်းကြောင်း Conditions ကိုကင်း preference ကိုများအတွက်လိုအပ်သောအရာ, orexin အာရုံခံမောင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 32, 4623-4631 10.1523 / jneurosci.4561-11.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schmeichel ကကာကွယ်နိုင်, L.Vendruscolo အက်ဖ်, K.Misra K. , et al J.Schlosburg အီး, အကြောင်းအရာ C. , D.Grigoriadis အီး, BE ။ (2013) ။ Hypocreathin-2 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းထိုး-ရသည် extendeed access ကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ compulsive ကဲ့သို့ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Program ကိုအမှတ် 257.13 ။ 2013 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး Planner က San Diego မှ,, CA: အာရုံကြောသိပ္ပံ 2013, အွန်လိုင်းများအတွက် Society က။
Schneider ER, Rada P. , Darby RD, Leibowitz SF, Hoebel BG (2007) ။ Orexigenic peptides နှင့်အရက်စားသုံးမှု: orexin, galanin နှင့် ghrelin ၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 31, 1858-1865 10.1111 / j.1530-0277.2007.00510.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
RE (2002) ကိုကြည့်ပါ။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ conditional-cued relapse ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 71, 517-529 10.1016 / s0091-3057 (01) 00682-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sharf R. , Sarhan အမ်, Dileone RJ (2008) ။ Orexin မိုးရွာသွန်းမှုမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး mediates နှင့်နျူကလိယ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation shell ကို accumbens ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 64, 175-183 10.1016 / j.biopsych.2008.03.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shoblock JR, Welty N. , Aluisio L. , Fraser ဗြဲ, Motley ST, Morton K. , et al ။ (2011) ။ အဆိုပါ orexin-2 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ်ပိတ်ဆို့အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး, နေရာ preference ကိုနှင့် reinstatement attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) 215, 191-203 10.1007 / s00213-010-2127-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sidhpura N. , Weiss အက်ဖ်မာတင်-Fardon R. (2010) ။ အီသနောရှာခြင်းနှင့်အားဖြည့်အပေါ် mGlu2 /3agonist LY379268 နှင့် mGlu5 ရန် MTEP ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ differential အီသနောမှီခို၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 67, 804-811 10.1016 / j.biopsych.2010.01.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က RJ, Aston-Jones ဟာဂျီ (2012) ။ Orexin / hypocretin 1 အဲဒီ receptor ရန်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် cue-သွေးဆောင်ဘိန်းဖြူရှာလျော့နည်းစေသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 35, 798-804 10.1111 / j.1460-9568.2012.08013.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က RJ, Tahsili-Fahadan P. , Aston-Jones ဟာဂျီ (2010) ။ Orexin / hypocretin အခြေအနေတွင်မောင်းနှင်ကင်း-ရှာဘို့လိုအပ်ပေသည်။ Neuropharmacology 58, 179-184 10.1016 / j.neuropharm.2009.06.042 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က Y. , Raju DV, Pare JF, ဆေးရဲ့သူမတူတဲ့အမ် (2004) ။ အဆိုပါ thalamostriatal system ကို: အ Basal ganglia circuitry တစ်အလွန်အမင်းတိကျတဲ့ကွန်ယက်ကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 27, 520-527 10.1016 / j.tins.2004.07.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stratford TR, Wirtshafter ဃ (2013) ။ အဆိုပါ paraventricular thalamic နျူကလိယသို့ muscimol ၏ထိုး, ဒါပေမယ့်မရ mediodorsal thalamic အရေးပါ, ကြွက်များတွင်အစာကျွေးသွေးဆောင်။ ဦးနှောက် Res ။ 1490, 128-133 10.1016 / j.brainres.2012.10.043 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
su HS, Bentivoglio အမ် (1990) ။ ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens, amygdala နှင့် hippocampus မှထုတ်လုပ်တဲ့ Thalamic midline ဆဲလ်လူဦးရေ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 297, 582-593 10.1002 / cne.902970410 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Swanson LW (2000) ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏နှောက် hemisphere စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 886, 113-164 10.1016 / s0006-8993 (00) 02905-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thompson က JL, Borgland SL (2011) ။ လှုံ့ဆျောမှုအတွက် hypocretin / orexin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 217, 446-453 10.1016 / j.bbr.2010.09.028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Trivedi P. , ယုအိပ်ချ်, MacNeil DJ သမား, ဗန် der Ploeg LH, ဂွမ် XM (1998) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အဲဒီ receptor mRNA ၏ဖြန့်ဝေ။ FEBS လက်တ။ 438, 71-75 10.1016 / s0014-5793 (98) 01266-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsujino N. , Sakurai တီ (2013) ။ arousal, နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် orexin ၏အခန်းက္ပ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 7: 28 10.3389 / fnbeh.2013.00028 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် der Werf ကိုက်, Witter အမတ်, Groenewegen HJ (2002) ။ အဆိုပါ thalamus ၏ intralaminar နှင့် midline အရေးပါ။ arousal နှင့်အသိပညာ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်မှုများအတွက်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 39, 107-140 10.1016 / s0165-0173 (02) 00181-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vertes RP, ဟူးဗားသည့် WB (2008) ။ အဆိုပါ paraventricular ၏ projections နှင့်ကြွက်များတွင် dorsal midline thalamus ၏ paratenial အရေးပါ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 508, 212-237 10.1002 / cne.21679 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Walker က DL, Toufexis DJ သမား, Davis ကအမ် (2003) ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအတွက် amygdala နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏အခန်းက္ပ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 463, 199-216 10.1016 / s0014-2999 (03) 01282-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wedzony K. , Koros အီး, Czyrak အေ, Chocyk အေ, Czepiel K. , Fijal K. , et al ။ (2003) ။ အီသနောမှပြန်လည်ထိတွေ့သို့မဟုတ် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ကအောက်ပါဦးနှောက်က c-Fos စကားရပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ။ Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol ။ 368, 331-341 10.1007 / s00210-003-0811-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weiss အက်ဖ် (2005) ။ တဏှာ၏ Neurobiology, အေးစက်ဆုလာဘ်များနှင့် relapse ။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ 5, 9-19 10.1016 / j.coph.2004.11.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Winrow CJ, Tanis KQ, Reiss DR, Rigby လေး, Uslaner JM, Uebele VN, et al ။ (2010) ။ Orexin အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလှုံ့ဆော်ထိတွေ့မှုကနေရရှိလာတဲ့မှတ်တမ်းနှင့်အမူအကျင့် plasticity ကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropharmacology 58, 185-194 10.1016 / j.neuropharm.2009.07.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Winsky-Sommerer R. , Yamanaka အေ, Diano အက်စ်, Borok အီး, Roberts သည် AJ, Sakurai တီ။ (2004) ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေတဲ့ဝတ္ထု circuit ကို: အ corticotropin-releasing အချက်စနစ်နှင့် hypocretins (orexins) အကြားအပြန်အလှန်။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 11439-11448 10.1523 / jneurosci.3459-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Young က CD ကို, Deutch AY (1998) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အပေါ် thalamic paraventricular နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 60, 753-758 10.1016 / s0091-3057 (98) 00051-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
zhou Y. , Cui CL, Schlussman SD, Choi JC, ဟိုအေ, ဟန် JS, et al ။ (2008) ။ ကိုကင်းရာအရပ်ကိုအေးစက်၏ဆိုးကျိုးများ, နာတာရှည်ကအရှိန်မြင့်တက်လာ-ထိုး "မူးရူး" ပုံစံကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စူးရှသောဆုတ်ခွာ orexin / hypocretin နှင့် Fischer နှင့် Sprague-Dawley ကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်မျိုးဗီဇအသုံးအနှုန်းတွေ preprodynorphin ပေါ်မှာ။ neuroscience 153, 1225-1234 10.1016 / j.neuroscience.2008.03.023 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]